နည်းပြနဲ့ကစားသမားကြားက ပဋိပက္ခဖြစ်ရပ်တွေကို မှတ်မိသေးရဲ့လား
ဘောလုံးလောကမှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ နည်းပြနဲ့ကစားသမားအကြား ပဋိပက္ခ ဖြစ်ရပ်များ
2 Oct 2018 . 4:52 PM
ဒီရက်ပိုင်း ဗြိတိန်မီဒီယာတွေရဲ့ သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာ နေရယူထားတာက မော်ရင်ဟို Mourinho နဲ့ ပေါ့ဘာ Pogba တို့ရဲ့ ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက လိပ်ခဲတည်းလည်းဖြစ်နေပြီး အကြိတ်အခဲတွေက တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာပါပြီ။ ဘောလုံးလောကမှာ နည်းပြနဲ့ ကစားသမားအကြား ဒီလို မပြေမလည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေက ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။
အဲဒီထဲကမှ ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ဒိုမီနက်ခ်ျ Domenech နဲ့ ပြင်သစ်ကစားသမားများ
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ နည်းပြ ဒိုမီနက်ချက်နဲ့ ပြင်သစ်ကစားသမားတွေ ပြဿနာ တက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကို အခုအချိန်အထိ ပရိသတ်တွေ အမှတ်ရနေဆဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ နည်းစနစ်တွေကို အနယ်လ်ကာ Anelka ဝေဖန်ခဲ့လို့ ပြဿနာ စဖြစ်တာကနေ ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေလည်း ပါဝင်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီလို မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ပဲ ပြင်သစ်အသင်းက ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ နိုင်ပွဲမရှိဘဲ အုပ်စုအဆင့်က လှည့်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
ရွိုင်ကိန်း Roy Keane နဲ့ အဲလက်စ်ဖာဂူဆန် Alex Ferguson
ဒီဆရာတပည့်နှစ်ဦးရဲ့ ပဋိပက္ခက အဲဒီအချိန်တုန်းက ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ MUTV နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ရွိုင်ကိန်းက ဖာဂူဆန်ကို ဝေဖန်ခဲ့လို့ အကြီးအကျယ် ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပြီး အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ရွိုင်ကိန်း ဆဲလ်တစ်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတာပါပဲ။
မန်စီနီ Mancini နဲ့ တီဗက်ဇ် Tevez
ခေါင်းကြောမာတဲ့ တီဗက်ဇ်နဲ့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့ မန်စီနီတို့ရဲ့ပွဲကလည်း ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီမှာ သူတို့နှစ်ဦး ဆက်ဆံရေးအဆင် မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ ကစားတဲ့ ပွဲမှာဆိုရင် တီဗက်ဇ်ဟာ လူစားဝင်ကစားဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့လို့ အကြိတ်အခဲက ပိုကြီးထွားခဲ့တယ်။ ၂၀၁၃ မှာ မန်စီးတီးကစားသမားဘ၀ကို တီဗက်ဇ် အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။
အဲလက်စ်ဖာဂူဆန် Alex Ferguson နဲ့ ဘက်ခမ် Beckham
ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။ ၂၀၀၂-၀၃ ရာသီတုန်းက အာဆင်နယ်ကို ရှုံးခဲ့တဲ့ FA ဖလားပွဲအပြီးမှာ ဒေါသအိုးကြီး ဖာဂူဆန် ပေါက်ကွဲတာကနေ ဘောကန်ဖိနပ်ကို ကန်လိုက်တာက ဘက်ခမ်နဲ့ ထိပြီး မျက်ခုံးကွဲသွားခဲ့တယ်။ အဲဒီရာသီအပြီးမှာပဲ ဘက်ခမ်လည်း ရီးယဲလ်အသင်းဆီ ရောက်ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။
မက္ကာသီ McCarthy နဲ့ ရွိုင်ကိန်း Roy Keane
၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းက အိုင်ယာလန်အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ နည်းပြမက္ကာသီနဲ့ ရွိုင်ကိန်းတို့ အကြီးအကျယ်စကားများခဲ့ပြီး မက္ကာသီက ရွိုင်ကိန်းကို ချက်ချင်းပဲ အိမ်ပြန်ပိုခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်ယောက်ကြားက အကြိတ်အခဲဟာ အခုအချိန်အထိ မပြေလည်သေးပါဘူး။
Photo:The42,Goal,Twitter,Zimbio,Evening Standard,Toronto Star
ဘောလုံးလောကမှာ ထငျရှားခဲ့တဲ့ နညျးပွနဲ့ကစားသမားအကွား ပဋိပက်ခ ဖွဈရပျမြား
ဒီရကျပိုငျး ဗွိတိနျမီဒီယာတှရေဲ့ သတငျးစာမကျြနှာတှမှော နရေယူထားတာက မျောရငျဟို Mourinho နဲ့ ပေါ့ဘာ Pogba တို့ရဲ့ ပွဿနာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီနှဈယောကျရဲ့ ဆကျဆံရေးက လိပျခဲတညျးလညျးဖွဈနပွေီး အကွိတျအခဲတှကေ တဖွညျးဖွညျး ကွီးထှားလာပါပွီ။ ဘောလုံးလောကမှာ နညျးပွနဲ့ ကစားသမားအကွား ဒီလို မပွမေလညျဖွဈခဲ့တဲ့ ဖွဈရပျတှကေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။
အဲဒီထဲကမှ ပရိသတျတှနေဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား အဖွဈအပကျြတှကေို ပွနျလညျဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ဒိုမီနကျချြ Domenech နဲ့ ပွငျသဈကစားသမားမြား
၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ နညျးပွ ဒိုမီနကျခကျြနဲ့ ပွငျသဈကစားသမားတှေ ပွဿနာ တကျခဲ့တဲ့ဖွဈရပျကို အခုအခြိနျအထိ ပရိသတျတှေ အမှတျရနဆေဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ သူ့ရဲ့ နညျးစနဈတှကေို အနယျလျကာ Anelka ဝဖေနျခဲ့လို့ ပွဿနာ စဖွဈတာကနေ ကနျြတဲ့ကစားသမားတှလေညျး ပါဝငျလာခဲ့တယျ။ အဲဒီလို မတညျငွိမျမှုတှကွေောငျ့ပဲ ပွငျသဈအသငျးက ၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ နိုငျပှဲမရှိဘဲ အုပျစုအဆငျ့က လှညျ့ပွနျခဲ့ရပါတယျ။
ရှိုငျကိနျး Roy Keane နဲ့ အဲလကျဈဖာဂူဆနျ Alex Ferguson
ဒီဆရာတပညျ့နှဈဦးရဲ့ ပဋိပက်ခက အဲဒီအခြိနျတုနျးက ဟိုးလေးတကြျောကြျော ဖွဈခဲ့တယျ။ MUTV နဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ရှိုငျကိနျးက ဖာဂူဆနျကို ဝဖေနျခဲ့လို့ အကွီးအကယျြ ပွဿနာဖွဈခဲ့ပွီး အကြိုးဆကျအနနေဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှဈမှာ ရှိုငျကိနျး ဆဲလျတဈကို ပွောငျးရှခေဲ့ရတာပါပဲ။
မနျစီနီ Mancini နဲ့ တီဗကျဇျ Tevez
ခေါငျးကွောမာတဲ့ တီဗကျဇျနဲ့ ဆတျဆတျထိမခံတဲ့ မနျစီနီတို့ရဲ့ပှဲကလညျး ပရိသတျတှေ စိတျဝငျစားစရာ ဖွဈခဲ့ဖူးတယျ။ ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီမှာ သူတို့နှဈဦး ဆကျဆံရေးအဆငျ မပွဖွေဈခဲ့ပွီး ဘိုငျယနျမွူးနဈနဲ့ ကစားတဲ့ ပှဲမှာဆိုရငျ တီဗကျဇျဟာ လူစားဝငျကစားဖို့ ငွငျးဆနျခဲ့လို့ အကွိတျအခဲက ပိုကွီးထှားခဲ့တယျ။ ၂၀၁၃ မှာ မနျစီးတီးကစားသမားဘဝကို တီဗကျဇျ အဆုံးသတျခဲ့ပွီး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဆီ ပွောငျးရှခေဲ့ပါတယျ။
အဲလကျဈဖာဂူဆနျ Alex Ferguson နဲ့ ဘကျခမျ Beckham
ဒီအဖွဈအပကျြကတော့ ထှထှေထေူးထူး ပွောစရာလိုမယျ မထငျပါဘူး။ ၂၀၀၂-၀၃ ရာသီတုနျးက အာဆငျနယျကို ရှုံးခဲ့တဲ့ FA ဖလားပှဲအပွီးမှာ ဒေါသအိုးကွီး ဖာဂူဆနျ ပေါကျကှဲတာကနေ ဘောကနျဖိနပျကို ကနျလိုကျတာက ဘကျခမျနဲ့ ထိပွီး မကျြခုံးကှဲသှားခဲ့တယျ။ အဲဒီရာသီအပွီးမှာပဲ ဘကျခမျလညျး ရီးယဲလျအသငျးဆီ ရောကျရှိခဲ့ပါတော့တယျ။
မက်ကာသီ McCarthy နဲ့ ရှိုငျကိနျး Roy Keane
၂၀၀၂ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတုနျးက အိုငျယာလနျအသငျးရဲ့ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ နညျးပွမက်ကာသီနဲ့ ရှိုငျကိနျးတို့ အကွီးအကယျြစကားမြားခဲ့ပွီး မက်ကာသီက ရှိုငျကိနျးကို ခကျြခငျြးပဲ အိမျပွနျပိုခဲ့တယျ။ ဒီနှဈယောကျကွားက အကွိတျအခဲဟာ အခုအခြိနျအထိ မပွလေညျသေးပါဘူး။